Itekhnoloji yeRFID izise utshintsho olukhulu kulawulo lokugcina. Ngenxa yesantya sokufunda / sokubhala ngokukhawuleza, uluhlu olude lokufunda, amandla amakhulu okugcina kunye nokudlulisa idatha ngokukhuselekileyo, sele ...
Ityala eliphumelelayo le-MIND rfid ID card
Ikhadi lesazisi le-RFID ngokubanzi lisebenzisa izinto ze-PVC, kodwa linokusebenzisa ezona zinto zingcono zokhuselo lokusingqongileyo, ezinjengePC, izinto zePETG ngokweemfuno zomthengi. INGQONDO inokulungiselela ...
Ityala lekhadi lebhanki le-smart
ngomphathi ku 20-10-25
Ikhadi leBhanki lahlulahlulwe laba likhadi lemagnethi kunye nekhadi le-Smart IC kubandakanya nekhadi le-IC chip kunye nekhadi le-rfid esikubiza ngokuba yi-ic khadi. Ikhadi lebhanki le-Smart IC libhekisa kwikhadi eline-ic chip a ...
Inkqubo yeThala leencwadi leRFID
Ngokusekwe kwinqanaba le-RFID le-automation degree, lula, amandla amakhulu njl.njl, sele isasazeke ngokubanzi kwilizwe nangakumbi. Abantu banokuboleka kwaye babuyise incwadi ngokulula. Inokuphucula li ...
I-RFID Gateways kunye ne-Portal izicelo zigcina umkhondo o
I-RFID Gateways kunye ne-Portal izicelo zigcina umkhondo wempahla ekuhambeni, ukuzibeka kwiindawo okanye ukujonga ukuhamba kwazo kwizakhiwo. Abafundi beRFID, abanee-eriyali ezifanelekileyo ezibekwe emnyango ...
I-RFID yeWaranti, ukubuya kunye nokulungiswa kwempahla yokulandelela ebuyiswe phantsi kwewaranti okanye ezo zifuna ukulungiswa okanye ukuvavanywa / ukulinganiswa kunokuba ngumceli mngeni. Ukuqinisekisa ukuba iitshekhi ezichanekileyo kunye nomsebenzi zi c ...
Le yiprojekti yokuhamba yokuba ikhadi lelomsebenzisi ukuba asebenzise inombolo ye-serial kunye ne-pincode ukungena kwiwebhusayithi ukuze abhalise kwakhona. Siphumelele ngempumelelo kule projekthi ngokuprinta okuhle kakhulu ...
Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwizisombululo ezahlukeneyo ezikrelekrele ze-RFID kwiinkalo ezahlukeneyo zothutho lukawonke-wonke, kunye nolawulo lwamathala eencwadi, ukuchongwa kwezilwanyana, ukuhlawuliswa kwesango lokurhafisa njl.
Isisombululo seNFC kwimeko yeHonda
Isisombululo se-NFC: I-MIND ityikitye ubambiswano lobuchule kunye ne-HONDA kwi-2017. Ngokusebenzisa i-MIND NFC Card (kufutshane neNdawo yoNxibelelwano), umthengi ucofe i-NFC enikwe amandla ngokuchasene nekhadi elinokuthi ...
Ikhadi lelungu leMagnetic kunye nesiphathi
ngomphathi ku 20-10-18
i-oject yeyokuba umthengi avule isixeko esitsha sokutya saseJapan Cuisine sidinga imveliso epheleleyo yobulungu, bafuna ukusebenzisa inkqubo kunye nekhadi lelungu ekusebenziseni, ukulayisha kwakhona imali, ukuphuhlisa i-g entsha ...
Itekhnoloji yeRFID izisa utshintsho olukhulu kugcino kunye nakwindawo yokugcina izinto. Ngenxa yesantya sokufunda / ukubhala ngokukhawuleza, uluhlu olude lokufunda, indawo yokugcina enkulu kunye nokudlulisa idatha ngokukhuselekileyo, ine ...
Isisombululo sekhadi lesitshixo seHilton Marriott Hotel
Ikhadi leendwendwe leRFID Ihotele VING / SALTO / BETECH / ADEL Kuluntu lwanamhlanje, amakhadi e-RFID axhaphake ngakumbi kwaye ayathandwa kwinkqubo yokutshixa iindwendwe ehotele. Njengenye yeemveliso eziphambili kwi-MIND RFID, MIND's RFID Hotel ...